Model Kursiga Tartanka Jumladda 1501-4 Soo-saare iyo Alaab-qeybiye |Laba-qarxin
Midabka:Madow + Casaan + Cadaan / Madow + Buluug + Cadaan
Ma heli karaa muunad ka hor inta aan la kala qaadin?Oo sidee ku saabsan eedeymaha?
Haa, dabcan, waanu soo dhawaynaynaa dalabka muunada si loo tijaabiyo oo loo hubiyo tayada. Macmiilka cusub wuxuu u baahan yahay inuu bixiyo kharashka muunada.Macaamiishii hore ee cunay wax ka badan laba jeer uma baahna khidmadda muunada, kaliya muunad lagu qaado xamuulka.
Ilaa intee ayay jirtaa damaanada alaabtaadu?
Hal sano oo dammaanad ah.
Lacag bixinta T/T, L/C.
Waa maxay suuqayada ugu badan?
Yurub, USA, Mid-Bari, Aasiya waa suuqayada ugu badan.
Adigoo raacaya mabda'aaga "tayada, gargaarka, waxqabadka iyo kobaca", waxaan hadda ka helnay kalsoonida iyo ammaanta macaamiisha gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee Shiinaha Gold Supplier ee Shiinaha Warshada Shiinaha ee Tooska ah ee Ergonomic iibka maqaarka ee Kursiga Ciyaaraha Kubbadda Cagta oo leh Footrest, alaabtayadu waxay leeyihiin Sumcad wanaagsan oo laga helo adduunka oo ah qiimaha ugu tartanka badan iyo faa'iidada ugu badan ee adeegga iibka ka dib macaamiisha.
Iibiyaha Dahabka ee Shiinaha ee Guddoomiyaha Lift-ka Shiinaha, Kursiga Ciyaaraha, Hadda, oo leh horumarinta internetka, iyo isbeddelka caalamiga ah, waxaan go'aansanay inaan ganacsiga u kordhinno suuqa dibadda.Iyadoo la soo jeedinayo in la keeno faa'iido badan macaamiisha dibadda iyadoo si toos ah dibadda.Markaa waxaan bedelnay maskaxdeena, laga bilaabo guriga ilaa dibadda, waxaan rajeyneynaa inaan siinno macaamiisheena faa'iido badan, oo aan rajeyneyno fursad badan oo aan ku sameyn karno ganacsi.
Hore: Ciyaartoyga Kursiga Model 1501-3
Xiga: Qaabka Kursiga Dhaqaalaha 1709-O